Wasiirada Arrimaha dibedda Turkiga, Afgaanistan iyo Iiraan oo kulan yeelanaya - Radio Risaala: Somali News Online
Home Caalamka Wasiirada Arrimaha dibedda Turkiga, Afgaanistan iyo Iiraan oo kulan yeelanaya
Wasiirada arrimaha dibedda ee Turkiga, Afgaanistaan, iyo Iiraan ayaa Axadda wada yeelan doona wada hadallo saddex geesood ah oo qayb ka ah Madasha Diblomaasiyadda Antalya, Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Turkiga ayaa sheegtay Jimcihii warkan.
“Marka lagu daro horumarkii ugu dambeeyay ee ku saabsan Geedi socodka Nabadda ee Afgaanistaan, iskaashiga dhinacyada amniga, tamarta, isku xirnaanta iyo socdaalka aan caadiga ahayn ayaa laga wada hadli doonaa inta lagu gudajiro Shirka Saddex geesoodka ah,” ayaa lagu yiri bayaan ay soo saartay wasaaraddu.
Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Turkiga Mevlut Cavusoglu ayaa sidoo kale kulamo laba geesood ah la qaadan doona dhiggiisa Iran iyo Afgaanistaan ​​ dhinaca Shirka Madasha Diblomaasiyadda ee Antalya.
Doodaha ahmiyadda u leh caalamka ayaa si qoto dheer loo falanqeyn doonaa inta lagu guda jiro madasha, oo ay ku jiraan Balkans, mustaqbalka Yurub, xiriirka trans-Atlantic, qaxootiga iyo muhaajiriinta, iyo halista argagixisada. Waxaa sidoo kale jiri doona kalfadhi ku saabsan soo jeedinta Turkiga ee shirka bariga Mediterranean.
Previous articleSoomaaliya & Kenya oo ka wada hadlay soo celinta & adkeynta xiriirkooda
Next articleDHAGEYSO:- Warka Habeen ee Radio Risaala19-06-2021